AKON’NY FANKALAZANA NY ANDRO MANERAN-TANY NY PAOSITRA
Nanamarika ny andron’ny faha 9 oktobra avokoa na ny teto andrenivohitra na ireo biraom-paritry ny Ministeran’ny Paositra sy ny Fifandraisan-davitra ary ny Fampiroboroboana ny Haitao ara-Kajy Mirindra manerana ny Nosy. Endrika maro no nankalazana izany andro maneran-tany izany tamin’ity taona 2019 ity.
Nisy ny fanokanana Birao vaovao, fanamafisana sy fampahafantarana ireo vokatra eo anivon’ ny tontolon’ny Paositra sy ny Fifandraisan-davitra, nisy ihany koa ny fampirantiana hajia. Tsy diso anjara amin’izany ny fizarana aterineto maimaim-poana tamin’ny alàlan’ireo fitaovana fanampariahana izany.
Taratra tamin’izao fankalazana ny andro maneran-tany ny Paositra izao fa mbola manan-danja ary tena manana ny toerany ity orinasa izay eo ambany fiahian’ny Ministera ity. Namafisin’andriamatoa Ministra, Christian Ramarolahy moa fa « ho isan’ny orinasa sangany ny tontolon’ny Paositra atsy ho atsy ».